एमाले नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिइएको अल्टिमेटम आज सकिदै, के गर्ला माधव पक्ष? | Khash Khabar
गृह एमाले नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिइएको अल्टिमेटम आज सकिदै, के गर्ला माधव पक्ष?
एमाले नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिइएको अल्टिमेटम आज सकिदै, के गर्ला माधव पक्ष?
२१ असार २०७८, सोमबार ०५:२६
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना र नेपाली काँग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न एमालेको ओली पक्षले खनाल–नेपाल पक्षलाई दिएको अल्टिमेटमा आज सकिदैछ।
शुक्रवार बसेको एमालेको केन्द्रिय कमिटी बैठकले आज साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता गर्न चेतावनी सहितको निर्देशन दिएको थियो। दिइएको समयसीमाभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिइए पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन हुने चेतावनी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले दिएका थिए।
अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएसँगै हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास स्वरुप संस्थापन पक्षका नेताहरुले आइतवार नेता नेपालसहित खनाल–नेपाल पक्षीय नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए।
उपमहासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरु आइतवार विहानै नेपाल निवास पुगेर हस्ताक्षर फिर्ता गराएर पार्टी एकताको सन्देश दिन आग्रह गरेको थियो। त्यस लगत्तै आइतवार राति नेपालपक्षीय प्रभावशाली नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
शनिवार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर कायम राख्नेहरू एमाले हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। तर खनाल–नेपाल पक्षले भने कुनै हालतमा पनि हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडान छोडेको छैन।
आफूहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दा पनि ओलीको प्रतिगमनका निर्णयको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल पक्षको तर्क छ। पार्टी एकताका लागि आफूहरु सधै लचक रहेको तर अध्यक्ष ओलीले एकपछि अर्को अवैधानिक निर्णय गरेर एकता नचाहेको सन्देश दिइरहेको वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ छ।
# एमाले नेता
बर्षाका कारण भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध